FANAVAOZANA ARA-PANAHY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 20, 2015 Laisser un commentaire sur FANAVAOZANA ARA-PANAHY
“(Jehovah) Izay mahavoky soa ny vavanao; ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery.” (Salamo 103:5).
Ny sarin’ny voromahery dia hita ao anatin’ny marika ahafantarana (na ‘insigne’) nentin’ny sampan-Tafika tamin’ny andro taloha. Io fanao taloha io no mety ho nitarika an’i Etazonia hisafidy ny ‘voromahery sola’ ho mari-pamantarana (na ‘symbole’) ny fireneny. Vorona lian-dremby ny voromahery. Fatratra dia fatratra izy amin’ny hatanjahana sy ny fisidinana, ary matsilo dia matsilo ny masony. Nisy hevitra hafa koa tao an-tsain’i Davida raha nampitaha ny tenany tamin’ny voromahery izy. Toy ny voromanidina hafa, dia mihitsambolo ny voromahery. Mandritra izany fotoana izany dia tsy manao na inona na inona izy; rehefa izany, dia miverina manao izay fanaony indray izy. Rehefa nanavao ny fototry ny ainy izy dia miverina misidina eny amin’ny lanitra ambony indray.
Toy izany ny fiainan’i Davida teo amin’ny ara-panahy. Nisy fotoana nahalavo azy, Andriamanitra anefa nanangana azy indray; navaozin’Andriamanitra tamin’ny “zavatra tsara” izy. Nomen’Andriamanitra fahafaham-po Davida amin’ny alalan’ny teny fampanantenany -dia famelana ny heloka sy fiainam-panahy vaovao, ary fiainana mandrakizay. Isika koa dia mila fanavaozana toy izany. Amin’ny alalan’ny fiasam-pahasoavana, dia ny Filazantsara sy ny sakramenta, no anavaozan’Andriamanitra antsika. Hoy Paoly: “Fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina.” (Titosy 3:5). Nampahatsiahy ny Kolosiana ihany koa izy ny tokony hanarian’izy ireo hatrany ny toetra (na ny olona) taloha mbamin’ny asany ka hitafiany ny toetra (na olona) vaovao, “izay havaozina ho amin’ny fahalalana tsara araka ny endrik’Izay nahary azy” (Kolosiana 3:10). Tsy (fampiasan-tena na ‘exercice’) atao indray mandeha izany dia vita, fa zavatra ataon’ny Kristiana isan’andro ao amin’ny fiainam-baovao izay hizorany.
Endrey ny teny fisaorana izay ataon’ny mpanao Salamo amin’ny fanavaozana izay iainany eo ampelatanan’Andriamanitra! Noho ny amin’i Kristy, ilay Mpamonjy nampanantenaina, dia mamela ny heloka rehetra Andriamanitra. Amin’ny maha Kristiana, dia mahazo matoky isika fa, ao amin’i Kristy Jesosy, ny andro fahoriana dia arahin’ny fitahian’Andriamanitra omban’ny fanavaozam-piainana.
Publié parfilazantsaramada mars 20, 2015 Publié dansUncategorized